Relocate (သုအိုင်စံ); // 2003 & before | လမ်းအိုလေး
Relocate (သုအိုင်စံ); // 2003 & before
September 5, 2011 by lanolay	Leaveacomment
လူတစ်ယောက် ကျကျနနစီးနိုင်မယ့် ဖိနပ်တစ်ရံကို လူအယောက်ခြောက်ဆယ်လောက်က စနစ်တကျ ၀ိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ရခြင်းနဲ့ လူတစ်ဖွဲ့လုံး အသုံးပြုနိုင်မယ့် အတွေးအခေါ်တစ်ရပ်ကို လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကနေ စဉ်းစားဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ရခြင်းဟာ ညီမျှတယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောလာရင် ကျွန်တော် ဘာမှပြန်မငြင်းချင်တော့တာက ဘ၀ဟာ ဘ၀ဖြစ်နေလို့။ အဲဒီလူအားလုံးထဲမှာ ကိုယ်ဟာ ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်တာကို ခံယူရဲလိုက်ပြီ ■ – TiS –
လူ၊ ရယ်ဒီမိတ်များနှင့် … ဖြစ်တည်မှု
Artworks above were archived during periods of 2000 – 2003. More recent ones can be accessed via Thu I San’s Blog.
Categories: Kabyarz | Tags: သုအိုင်စံ, Kabyarz, lanolay, Thu I San | Permalink.
ဆာလ်ဖျူရစ် အက်ဆစ်များ၏ ဆယ့်နှစ်ရာသီပွဲတော် (မောင်ဒေး)